▷ World lehibe indrindra fianarana siansa momba ny vokatry ny fitsaboana Buchinger fifadian-kanina ... - New Presse.de News sy ny Press in Malagasy
▷ World lehibe indrindra fianarana siansa momba ny vokatry ny fitsaboana Buchinger fifadian-kanina …
11. Janoary 2019 presseportal fahasalamana 0
lehibe indrindra manerana izao tontolo izao navoaka fianarana siansa momba ny vokatry ny fitsaboana Buchinger fifadian-kanina. Copyright Buchinger Wilhelmi, Franziska Grundler, Stefan Drinda, Marina Michalsen, Françoise Wilhelmi de Toledo (avy eo ankavia miankavanana) rehefa fanombanana ny vokatra fanadihadiana. Lahatsoratra iray hafa momba ny… more
Überlingen (ots) – Ny fandalinana ara-tsiansa lehibe indrindra amin'ny vokatry ny fifadian-kanina fitsaboana Buchinger nentin'ny Dr. amin'ny. Françoise Wilhelmi de Toledo sy ny ekipany ao amin'ny toeram-pitsaboana nentim-paharazana Buchinger Wilhelmi amin'ny Lake Constance amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Prof. Dr. navoaka Andreas Michalsen avy ao amin'ny University charité hopitaly Berlin teo am-piandohan'ny.
dia fizahana ny tsipiriany ny fanangonana antontan'isa 1.422 Fastenden (41 % lahy, 59 % vehivavy), ny taona 2016 na 5, 10, 15 na 20 nahavita ny andro Fast Buchinger Wilhelmi fandaharana ao amin'ny toeram-pitsaboana.
Eo ambanin'ny lohateny “Safety, fanatsarana ny fahasalamana sy ny tsara-panahy nandritra ny 4 ny 21 andro ny fifadian-kanina amin'ny fotoana fianarana ao anatin'izany observational 1422 lohahevitra” dia voarakitra, fa ny fifadian-kanina Buchinger fitsaboana azo antoka sy mandaitra therapeutically. Ihany koa fa mampirisika ny olona-pihetseham-po sy ara-batana-panahy. Ny vokatry ny fanadihadiana izany dia aseho amin'ny 2. Janoary 2019 nivoaka an-tserasera tao amin'ny ataon'ny mpiara-gazety nandinika PLOS ONE.
Manokana, mety ho hita:
- Ny fifadian-kanina mihetsika ao amin'ny adipose sela ny vatan'olombelona
notehirizina angovo. Ny metabolism Switches avy gliokaozy ny tavy-
ary ketone fanjifana amin'ny, tsara be dia be vokatry
nahatonga. Ny fiovam-po metabolic tao amin'ny fianarana
noho ny fisian'ny ketone maharitra vatana in fisotrony
- Ny fifadian-kanina dia mitarika ho manan-danja levitra, mihena
Andilany circumference ary nampihena kolesterola- ary ny ra lipid haavon'ny.
- Ankoatra izany, ny fifadian-kanina normalized ny tosidra ny fasters
ary nohatsaraina ny diabeta maromaro toy ny ra sy ny gliokaozy HbA1c, noho izany
Maro ny antony no kokoa, ny ho aretim-fahasalamana
- Ankoatra izany, dia nifady hanina in kokoa 84 % ny tranga
olana ara-pahasalamana lehibe, toy ny
vanin-taolana, diabeta Typ 2 sy ny aretina sy ny aty matavy hypercholesterolemia,
Tosidra ambony sy ny harerahana.
- 93 % ny foto-kevitra tsy nahatsapa hanoanana nandritra ny fifadian-kanina,
izay nahatonga azy ireo hanao pihetseham-po sy ara-batana-panahy.
- Nanara-maso ny fitsaboana vitsivitsy dia nampiseho ny fifadian-kanina
levitra. Na dia izany aza, afaka mora foana izany, ary tsy misy interruption
fitsaboana ny fifadian-kanina. Amin'ny toe-javatra sasany ny tamin'ny voalohany
telo andro ho misamboaravoara matory, aretin'andoha, fatigue na
Lower aretina indray.
Araka ny hitantsika teo, izany dia efa hita, fa izany fandaharana Fast manokana dia azo antoka sy tsara leferina manatona ny fisorohana ny aretina mifandray amin'ny mandrakizay sy ny aretina mitaiza metabolic anisan'izany ny lanja olana.
Ny fifadian-kanina Wilhelmi Buchinger fandaharana mivoatra avy amin'ny fifadian-kanina Buchinger nentim-paharazana. Tafiditra ao anatin'izany ny fitantanana ny biolojika isan'andro juices voankazo sy lasopy amin'ny eo ho eo 200 kaloria, dia miaraka amin'ny vatana ary izany dia ao anatin'ny tontolo, ny fiadanana sy mindfulness sitraka. Izany Mitambatra ny fifadian-kanina arahina amin'ny integrative fanafody sy ny isan-karazany noho ny maha-pulses fampandrosoana.
Françoise Wilhelmi de Toledo, Franziska Grundler, Audrey Bergouignan, Stefan Drinda, Marina Michalsen: “Safety, fanatsarana ny fahasalamana sy ny tsara-panahy nandritra ny 4 ny 21 andro ny fifadian-kanina amin'ny fotoana fianarana ao anatin'izany observational 1422 foto-kevitra.” PLOS ONE, 2. Janoary 2019 http://ots.de/wK8ypH
telefaonina (030) 284 726 04
Original afa-po ny: Clinics Buchinger Wilhelmi, amin'izao fotoana izao ny vaovao nampitain'ny
Vaovao io dia avy amin'ny mpiara-miasa Network : https://www.presseportal.de/pm/52156/4162177
▷ Cruise: Star hoho ny voalohany mametraka sambo teo anatrehan'i Kambodza / Ny lehibe indrindra manerana izao tontolo izao …
Elatra havanana governemanta in Andalusia dia | Telepolis